Nakhu ukuthi uDkt Fauci uphendula kanjani ezimibhalweni zobumbano zokuziphatha okubi - i-BGR - Tamban RELAY
Nakhu ukuthi uDkt Fauci uphendula kanjani emibonweni yokwakha uzungu - BGR
Noma ebuzwa ngezimpawu zama-vaccine noma i-coronavirus theory, umeluleki wezempilo e-White House uDkt Anthony Fauci uthi uzama ngaso sonke isikhathi ukuphendula ngendlela efanayo.
Noma ebuzwa “ngexuku labantu elikhipha okuthile,” uFauci uthi ufuna ukuqhubeka nokunxusa wonke umuntu ukuthi “alandele isayensi.”
Lokhu kuvela kwinhlolokhono yamuva nje uDkt Fauci ayinikeze Ama-MSNBC Andrea Mitchell.
Ukuthi isifundo siyi yini kusuka kumaski wobuso kuya ekwelashweni okusebenzayo kwe-coronavirus kuya kumqondo ongajwayelekile we-coronavirus, umeluleki wezempilo e-White House UDkt Anthony Fauci ubelokhu ezwakala ephindeka kahle ezingxoxweni anikezwe zona ezinyangeni ezimbalwa ezedlule manje.
Lokho akusikho ukuthi ukugxekwa kukadokotela, ophinde futhi abe ngumqondisi weNational Institute of Allergy and izifo ezithathelwanayo, futhi ubukhona bakhe nokuhlukile kweBrooklyn sekuphenduke kakhulu kubantu baseMelika abafuna ulwazi olugunyaziwe nemithombo mayelana ubhubhane lwe-coronavirus lokho kuthuthukisile izimpilo zethu. Imishini yakhe yezentengiselwano izungeza kamuva nje, kubonakala sengathi iqukethe… kahle, into efanayo iphindaphindwa. Ubuye wabuza kaningi mayelana nezidakamizwa ezinamandla awo asetshenzisiwe. Mayelana nemaski obuso. Cishe lapho izimpilo zethu zingahle zibuyele kokujwayelekile. Mayelana nokugoma.
Kwesinye isikhathi, into entsha ingena ekuxubeni - njengokushicilelwa kwevidiyo yegciwane okunemiphumela emibi. Kamuva nje MSNBC ukubukeka, u-Andrea Mitchell ubuze uFauci ngokuqondile izinganekwane njengamamaski obuso ukungavimbeli okusebenzayo kwe-coronavirus nokuthi ikhambi eliyimfihlo le-coronavirus okuthiwa likhona futhi lifihlakala emphakathini. Ngabe kufanele ochwepheshe benze okuningi ukwenqaba lokho kungamanga, uDkt Fauci?
"Unembile impela, Andrea," kusho uFauci esiqeshini esingezansi, "yingakho ngicacisa kakhulu futhi ngingaqondakali lapho sithi kufanele silandele isayensi. Uma ucwaningo olucwaninga kahle luphuma futhi lukhombisa ukusebenza ngokuphepha nokuphepha kwe-hydroxychloroquine noma omunye umuthi esiwenzayo, uma usenza ngendlela efanele, wamukela imininingwane yesayensi. ”
UFauci ube eseqhubeka echaza ukuthi kumele ube nokuxoshwa kanjani ekusebenzelaneni nabantu abagqugquzela isayensi yamanga kanye nezinganekwane ezingalimaza.
"Njengamanje, namhlanje, imininingwane yesayensi ehlanganisiwe futhi eyenziwe izifundo eziningi ezahlukahlukene, ayikhombisi ukusebenza," kusho uFauci, ebhekisa ekugcizeleleni kwabantu ukuthi i-hydroxychloroquine iyisidakamizwa esisebenzayo se-coronavirus. "Ngakho-ke uma kunevidiyo laphaya eqenjini labantu elikhipha into engeyona eyeqiniso, okuwukuphela kwendlela ongayisebenzisa kumele kucace kakhulu lapho wethula idatha yesayensi empeleni ephikisana nalokho."
Labo bantu uFauci uzama ukuphikisana nokusabalalisa imininingwane enegunya ngokusemandleni afaka Louie Gohmert, Ingqungquthela yaseRiphabhlikhi yaseTexas okwathi ezinsukwini zakamuva yamemezela ukuthi ihlolelwe i-coronavirus. "Ngeke ngibuze ukuthi ngokugcina imaskhi nokuyigcina isendaweni uma ngabe sengifaka amanye ... aleli gciwane kumaskandi futhi ngaliphefumula ngo ... Kodwa imibiko yokufa kwami ​​isenesikhathi kakhulu," kusho yena. ngesikhathi nengxoxo nevidiyo. Njengoba sishilo kumbhalo wethu wangaphambilini, uGohmert wahlela ukuthi aqale ngokushesha ukwelashwa kwe-hydroxychloroquine ye-COVID-19, noma kwaziwa kahle njengamanje ukuthi lo muthi awusebenzi ekwelapheni i-COVID-19.
"Ukuphinda usebenzise kabusha," siphawule ngoGohmert nangesimo sakhe, "umuntu ongakholelwa kumaski wobuso ungenwe yigciwane eliyingozi kakhulu nelikhona emhlabeni, wazibuza ukuthi ngabe ukugqoka imaskhi kumtheleleke yini, futhi manje kuzothatha umuthi ongagcina umlimaze kakhulu kunokuhle. ”
U-Andy uyintatheli eMemphis naye onikela ngezitolo ezifana ne-Fast Company kanye ne-The Guardian. Uma engabhali ngobuchwepheshe, angatholakala emzingekile evikela iqoqo lakhe le-vinyl elihlaselayo, futhi enkulisa i-Whovianism yakhe kanye nokuzifela emidlalweni ehlukahlukene ye-TV okungenzeka ukuthi awuyithandi.
I-Covid-19: UTrump ubeka ingcindezi kubathengisi bezidakamizwa kanye ...
Ngeke ukholwe ukuthi yini abantu, izinyoni, nezilwane ezihuquzelayo ezifanayo! -
Umzingeli ophumile weNASA uqede umsebenzi wakhe… uhlobo - BGR
BGRu-conspiracyFauciLaphamoronickuphendulaeyeza nezazi zezinkanyezi ezikhuluma
TELES RELAY 17717 izikhala 1 amazwana
Isifutho se-Lysol nokusula, imaski yobuso engu- $ 1, $ 20 off top kamatilasi waseAmazon # 1, ngaphezulu - BGR
IZINDLELA eziyishumi ezihlanganisiwe esasihlose ukuzilibazisa NGESIPHUMA! - IVIDEO
Ngeke ukholwe ukuthi yini abantu, izinyoni, nezilwane ezihuquzelayo ezifana ngazo - I-BGR
Lolu cwaningo lungashintsha okucabanga ukuthi uyazi nge-coronavirus - BGR